စကျတငျဘာ 19, 2018 – Healthy Life Journal
ရင်သားကင်ဆာဝေဒနာရှင်အစ်မကို ဆေးရုံလိုက်စောင့်ရင်း ကိုယ်ပါဖြစ်မှန်းသိခဲ့တဲ့ ကင်ဆာကို ကုသအောင်မြင်ခဲ့သူ ဒေါ်မြင့်ကြည်
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းမူမြို့နယ်၊ ထီးဆောင်းရွာတွင် နေထိုင်သည့် ဒေါ်မြင့်ကြည်သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၌ အသက် ၄၂ နှစ်အရွယ်တွင် ရင်သားကင်ဆာဝေဒနာလက္ခဏာများ စတင်ခံစားခဲ့ရသည်။ “စစချင်း အကြောတွေ တက်တယ်။ လည်ပင်းကြောတွေ တက်တယ်၊ နောက်ကျောတွေ...
သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် သောက်စားရင်း စကားပြောနေကြသည်။ “ငါအခုလို စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံနေချိန်တွေဆို အနားမှာမင်းပဲရှိတယ်ကွာ… ဟိုတစ်ခါ ရုတ်တစ်ရက်ကြီး ဗိုက်တွေအောင့်လာပြီး ဆေးရုံတက်လိုက်ရတုန်းကလည်း မင်းရှိနေပြီး ဆေးရုံထိလိုက်ပို့ပေးလိုက်တာပဲ… ငါ အလုပ်ပြုတ်တဲ့နေ့တုန်းကလည်း အခုလိုပဲ မင်းရှိနေတာပဲ… မင်းက ငါ့အတွက် ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာ ငါသိလာပြီကွာ…” “ဒါပေါ့ကွာ.. သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့...
ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေမရအောင် . . .
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရမှုနည်းအောင် အောက်ပါ နည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ – လက်ကို စင်ကြယ်စွာ ဆေးကြောပါ အစာမစားခင်၊ အိမ်သာသွားအပြီး၊ အစာမပြင်ဆင်ခင်နဲ့ ပြင်ဆင်ပြီးအချိန်တွေမှာ လက်ကိုစင်ကြယ်စွာ ဆေးကြောသင့်ပါတယ်။ – ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပါ ကာကွယ်ဆေးတွေဟာ ရောဂါများစွာကို...
အဖြူရောင် မှိုဖူးတွေကို ဘာကြောင့်စားသင့်သလဲ. . .
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အခုချိန်မှာ အဖြူရောင်မှိုဖူးတွေကို ပေါပေါများများတွေ့နေရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်များများစားသင့်သလဲ အဖြူရောင်မှိုဖူးတွေဟာ ဟင်းလျာ အမျိုးမျိုးကို အရသာအစုံပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကယ်လိုရီ ပါဝင်မှုလျော့နည်းနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကောင်းစွာကျက်အောင် ချက်ပြုတ်ထားတယ်ဆိုရင် များများစားလို့ရပါတယ်။ အာဟာရတန်ဖိုး မှိုမှာဗီတာမင်...